Izeluleko Ezi-7 Zokumaketha Okuphumelelayo Kwedijithali Martech Zone
Izeluleko Ezi-7 Zokumaketha Okuphumelelayo Kwedijithali
NgoMsombuluko, Mashi 23, 2015 Douglas Karr
Umngane omuhle u-Adam Small une- yesikhulumi sokumaketha umbhalo weselula lokho kubona amanani amahle wokuhlengwa ekunikezelweni kombhalo we-SMS. Enye yezindlela angitshele ngayo lapho iklayenti elinikeze ifayili le- ulethe umngani nikela lapho uthole khona ukuzulazula kwamahhala lapho uletha umngane ekusungulweni. Babethumela umbhalo uhhafu wehora ngaphambi kwesidlo sasemini futhi kube nomugqa ophuma emnyango. Kungumqondo omuhle ngoba awukhombisi umuntu ogxumela kwisaphulelo kuphela, uthola umphathi omusha ozozama ukudla kwakho!
I-Colourfast, iphrinta ehamba phambili yamakhadi eCanada, usungule i-infographic ebizwa ngokuthi Amakhuphoni wedijithali Ukuthengisa Ukuthengisa Kwamaselula ne-Omni-Channel ehamba ngokusebenzisa kanye nezibalo ezihambisana namasu wokumaketha amakhuphoni edijithali. I-infographic inikeza lokhu Izeluleko Ezi-7 Zokumaketha Okuphumelelayo Kwedijithali:
Hlanganisa ne-imeyili - Qinisekisa ukuthi amakhuphoni edijithali ahlanganiswa ne-imeyili yamakhasimende akho. Ukuthwebula ikheli le-imeyili kukunikeza ithuba lokuzivuselela njalo kokukhethekile nezaphulelo futhi!
Faka Isikhalazo Esibukwayo - Faka uphawu lwakho noma izithombe zemikhiqizo enesibindi, imibala enamandla namafonti azothuthukisa abathengi.
Abathengi Abakhonjiwe - Ngokukhomba kwe-geo, amabhizinisi ayakwazi ukusizakala ngendawo yabathengi ukuletha amakhuphoni lapho eseduze!
Uzakwethu noMsabalalisi - Izinsizakalo zamakhuphoni zinamathuba amakhulu okusabalalisa ukunweba ukufinyelela kwakho.
Sebenzisa Ukuthumela Umbhalo - Dala uhlelo lwamakhasimende olubenza bazizwe sengathi bayingxenye yeklabhu ekhethekile futhi babanikeze izinhlinzeko ezihlukile.
Khuthaza Ukwabelana - Faka izinkinobho zemidiya yokuxhumana ukuze uvumele ukwabelana ngokuchofoza okukodwa kuzinkundla zokuxhumana.
Kala Imiphumela - Njengoba ukukhushulwa ngakunye kufinyelela esikhathini sokuphelelwa yisikhathi, bona ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini engasebenzi futhi uthuthukise umkhankaso wakho olandelayo.
Tags: Isigqebhezanaukumaketha kwekhuphoniisigqebhezana sedijithaliukumaketha kwekhuphoni ledijithaliamakhuphoni e-imeyiliamakhuphoni ephephandabaSMSama-sms amakhuphoniizaphulelo ze-smsamakilabhu ombhaloamakhuphoni omlayezo wombhaloizaphulelo zomlayezo wombhaloUkunikezwa komlayezo wombhaloimiyalezoi-valpak
Kungani Abantu Bame Ukulandela Umkhiqizo Wakho?
Lalela futhi Target Amathuba on Twitter nge SocialCentiv